नेपालले कालापानीबाट तत्काल सेना हटाउन भनेपछि भारतले फर्कायो यस्तो जवाफ, के भारत थर्किएकै हो ? — Sanchar Kendra
नेपालले कालापानीबाट तत्काल सेना हटाउन भनेपछि भारतले फर्कायो यस्तो जवाफ, के भारत थर्किएकै हो ?
काठमाडौं । भारतले नेपालसँगको सीमा समस्या समाधानका लागि ‘भरोसापूर्ण वातावरण’ भएमात्र वार्ता गर्न सकिने बताएको छ । नेपालका अधिकारीहरुले सीमा वार्ता गर्न भारत तयार नभएको भनिरहेका बेला भारतीय विदेश मन्त्रालयबाट पछिल्लो धारणा सार्वजनिक भएको हो ।
हिजाे मात्रै परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले भारतलाई कालापानी क्षेत्रबाट सेना हटाएर दुई देश बीचको विवादलाई यथास्थितिमा राख्न आग्रह गरेका थिए । मन्त्री ज्ञवालीले सुगौली सन्धिका अक्षर र भावना दुवैलाई सम्मान गर्न पनि भारतलाई भनेका छन् ।
भारतीय पत्रिका द हिन्दुसँगको अन्तर्वार्तामा परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले भनेका छन्, ‘कालापानीबाट सेना फिर्ता गरी सो भूभाग नेपाललाई फिर्ता गरेको अवस्थामा मात्र सुगौली सन्धिलाई सम्मान गरेको ठहर्छ ।’
भारतसँगको हार्दिकतापूर्ण सम्बन्ध आफ्नो प्राथमिकतामा रहेको भन्दै उनले वार्ताबाटै समस्या समाधानमा जोड दिएका छन् । मन्त्री ज्ञवालीले भनेका छन्, ‘भारतले नेपाली भूभागमा एकतर्फी रुपमा सडक बनाउनु हुँदैनथ्यो र वार्ताबाटै समस्या समाधान गर्नुपर्ने थियो भन्ने कुरामा पुनः जोड दिन चाहान्छौं ।’
‘नेपालसँगको ऐतिहासिक र सांस्कृतिक रूपमा घनिष्ठ सम्बन्धलाई भारतले सधैँ महत्व दिँदै आएको छ,’ उनले भने, ‘भारतको सहयोगमा सुरु गरिएका विकास योजनाले पनि त्यसलाई पुष्टि गर्छ ।’
कोरोना भाइरस संक्रमणको समयमा पनि अत्यावश्यक वस्तुको आपूर्ति गरे भारतले नेपाललाई सहयोग गरिरहेको पनि उनले बताएका छन् । नेपाल–भारतबीच जारी तनावको बेला भारतीय विदेश मन्त्रालयबाट आएको यो अभिव्यक्तिलाई अर्थपूर्ण मानिएको छ ।
नेपालको संविधान जारी भएपछि असन्तुष्ट भारतले नाकाबन्दी गरेर नेपालमा अत्यावश्यक वस्तुको आपूर्ति रोकेको थियो । विनासकारी भूकम्पबाट तहसनहस भएको कठिन परिस्थितिमा भारतले गरेको नाकाबन्दीको पनि नेपाल सरकार र नेपाली जनताले डटेर सामना गरेका थिए । नेपालमा मात्र नभइ भारतमै पनि तीव्र विरोध भएपछि भारत नाकाबन्दी फिर्ता लिन बाध्य भएको थियो । नेपाल भूपरिवेष्टित राष्ट्र भएकाले छिमेकी देशले नाकाबन्दी लगाउन अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले नमिल्ने जानकारहरु बताउँछन् ।
यस्तै सिमा विवादको बिषयलाई लिएर भारतीयहरुले देखाएको घटिया हर्कतबिरुद्ध नेपाली सेनाको आधिकारिक धारण बाहिरिएको छ । केही भारतीय मिडियामा आएका समाचारलाई लिएर नेपाली सेनाले आफ्नो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । सैनिक मुख्यालयबाट बिहीबार राति जारी गरिएको विज्ञप्तिमा केही भारतीय सञ्चारमाध्यममा आएका समाचार दुई देशका सेनाबीच सम्बन्धमा खलल पुऱ्याउने खालका भएको बताइएको छ ।
यस्तै यता अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले सीमामा जारी तनावको विषयलाई लिएर भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको मुड ठीक नभएको टिप्पणी गरेका छन् । उनले भारत र चीनको सीमा विवाद समाधानका लागि मध्यस्थता गर्न अमेरिका तयार रहेको पुनः दोहोर्याएका पनि छन् ।